ကမ္ဘာပေါ်မှာအရက်စက်ဆုံး မုဒိမ်းမှု့....( ဖြစ်ရပ်မှန် ) - MM Live News
October 17, 2018 MM Live1 Comment on ကမ္ဘာပေါ်မှာအရက်စက်ဆုံး မုဒိမ်းမှု့….( ဖြစ်ရပ်မှန် )
‘စောဂျင်ဟန်း’ဆိုတဲ့လူသားတစ်ဦးဟာ ၁၉၆၇ ခုနှစ်မှာ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ တောမြို့လေးတစ်မြို့မှာ မွေးဖွားပြီး လောကကြီးထဲမှာ လူရယ်လို့ ဖြစ်လာခဲ့တယ်..။
မောင်နှမ ၁၀ ယောက်မှာ သူက ၆ ယောက်မြောက် သားယောက်ျားလေးပေါ့…။အဖေက လောင်းကစားသမား…။အမေကဈေးထွက်ရောင်းပြီး ကလေး ၁၀ ယောက်ကို အနိုင်နိုင် လုပ်ကျွေးနေရတဲ့ဘဝ..။
သူဟာ ငယ်ငယ်ကတည်းက မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်မှုမရှိ..သူတစ်ပါးကို အပြစ်လွှဲချ…ဥပဒေချိုးဖောက် … တစ်ခုခုကိုစွဲစွဲမြဲမြဲမလုပ်နိုင်..…စတဲ့ ဆိုက်ကိုပါ့သ်ရဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့မွေးဖွားလာတယ်။လူတွေကို အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်…။
စောဂျင်ဟန်း….စောဂျင်ဟန်းဟာ လူပျိုပေါက်စဖြစ်လာကတည်းက အိမ်ဘေးက မိန်းကလေးတွေကို အမြဲ မကောင်းကြံဖို့ ကြိုးစားနေခဲ့တဲ့သူ…။
မဟုတ်တာမှန်သမျှ အကုန်လုပ်တဲ့ စောဂျင်ဟန်းကို ဆိုဆုံးမမယ့်သူ တစ်ယောက်မှမရှိ…။စောဂျင်ဟန်းဟာ ခိုးမှုနဲ့လည်း ရဲစခန်းကို ခဏခဏရောက်တယ်။
သူဟာ ၁၇ နှစ် အရွယ်ရောက်တော့ ဆိုးလ်မြို့ကိုတက်ပြီး စက်ရုံတစ်ရုံမှာအလုပ်ဝင်လုပ်တယ်။ဆိုးလ်မြို့မှာ နိုက်ကလပ်တက်၊ ရန်ဖြစ်၊ ခိုးယူ မကောင်းမှုမှန်သမျှ အကုန်လုပ်တယ်။
စောဂျင်ဟန်းဆို လူတွေက ကြောက်ရုံတင်မဟုတ် …ရွံကြတယ်။လူယုတ်မာ…ကလိမ်ကကျစ်..။
၁၉၉၀ခုနှစ် ၉ လပိုင်း ၂၅ ရက် မနက် ၂:၃၀….
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်က ညဖက်အလုပ်လုပ်ရတာကို သိနေတဲ့ စောဂျင်ဟန်းဟာ အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရဲ့ မိန်းမကို မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့တယ်…။
ဘေးအိမ်က အသံတွေကြားနိုးလာတော့ ထွက်ပြေးသွားပြီး အခြားအိမ်က အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးကို ဝင်ပြီး မုဒိမ်းကျင့်ပြန်တယ်။တစ်ညထဲ မုဒိမ်းမှု ၂ ခုကို ဒီလိုဆက်တိုက်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်။
ဒါကို တရားသူကြီးက ထောင်ဒါဏ် ၂ နှစ်ပဲချခဲ့တယ်။ ဘယ်လိုတရားသူကြီးလဲ ပြည်သူတွေက နားမလည်နိုင်…။
၁၉၉၃ ခုနှစ် ၅ လပိုင်း ၂၁ ရက်နေ့ ထောင်ကပြန်လွတ်လာပြီး ဓားပြတိုက်မှုနဲ့ထောင်ထပ်ကျတယ်။ထောင်ဒါဏ် ၃ နှစ် ၆ လ။မုဒိမ်းမှုတုန်းက ၂ နှစ်၊ ဓားပြတိုက်မှုကျတော့ ၃ နှစ် ၆ လ…. အဲဒီတုန်းက တောင်ကိုရီးယား ဥပဒေပေါ့..။
တချို့ မုဒိမ်းသမားတွေဆို အကျယ်ချုပ်ပဲကျတာ။ထောင်ကလွတ်လာတဲ့ စောဂျင်ဟန်းဟာ သူ့မွေးရပ်ကိုပြန်နေတယ်။
၁၉၉၇ ခုနှစ် ၈ လပိုင်း ၁၅ ရက်နေ့…..နယ်မြို့ဆိုတော့ တချို့ အိမ်သာတွေက အိမ်အပြင်ဖက်မှာဆောက်ကြတယ်..။ အိမ်သာထဲကထွက်လာတဲ့ အသက် ၃၀ အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို အိမ်သာထဲပြန်ဆွဲခေါ်သွားပြီး မုဒိမ်းကျင့်ပြန်တယ်။
”အဖေရေ..ကယ်ပါဦး..” လို့အော်နေတဲ့ မိန်းကလေးအသံကြားလို့ ၁ နာရီလောက်အကြာ မှာ လူတွေက ကယ်တင်လိုက်နိုင်တယ်။ဒီတစ်ခါတော့ ထောင်ဒါဏ် ၅ နှစ် …။
၂၀၀၂ ခုနှစ် ၉ လပိုင်း….ထောင်ကလွတ်လာပြန်တယ်။ဒီတစ်ခါတော့ မွေးရပ်ကိုပြန်လို့မရတော့ဘူး ။ သူလာရင် သတ်ပစ်မယ်လို့ ကြိမ်းမောင်းနေကြပြီလေ…။သူဟာ ဆိုးလ်မြို့ရဲ့ မြောင်မုတ်ရပ်ကွက်မှာနေတယ်။
၂၀၀၄ ခုနှစ် ၄ လပိုင်း….မုဒိမ်းမှုထပ်ကျူးလွန်ပြန်တယ်…။ဒီတစ်ခါတော့ ထောင်ဒါဏ်၁၀ နှစ်ချခြင်းခံရခဲ့တယ်…။ဒါပေမဲ့ ရဲထောက်လှမ်းရေးတို့ရဲ့ မှုခင်းမှတ်တမ်း စာအမှားအယွင်းကြောင့် ၇ နှစ် ၆ လ ပဲထောင်ကျပြီး လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြန်တယ်။
တရားသူကြီးတွေဟာ ဒီလို ဆက်တိုက်အမှားတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်။စောဂျင်ဟန်းကလေးဘဝကစပြီး ဒီအသက်အရွယ် ၄၄ နှစ်အထိ ထောင်ထဲမှာနေခဲ့ရတာ အားလုံးပေါင်း ၁၈ နှစ်…။ ထောင်ဆိုတာ သူ့အိမ်ပဲလေ…။ ထောင်ထဲပြန်ဝင်ရမှာ သူ မကြောက်…။
မိန်းကလေးတွေ မကောင်းကြံဖို့အတွက် ထောင်ကထွက်လာမယ့်အချိန်ကို စောင့်နေတဲ့သူ…။အခုလည်း သူထင်တာထက်စောပြီး လွတ်မြောက်လာလို့ ဝမ်းသာနေတယ်။သူအတွေးက တစ်ခုတည်း…။
“မုဒိမ်းကျင့်မယ်..” သူ့အတွက်တော့ မိန်းကလေးဆိုတာ မုဒိမ်းကျင့်လို့ရတဲ့ အသုံးချခံပစ္စည်းတွေ…။မကောင်းကြံ မုဒိမ်းကျင့်….မိတဲ့နေ့ ထောင်ထဲပြန်ဝင်လိုက်ရုံပဲလေ.,။
ထောင်ထဲမှာ မိန်းကလေးတွေကို ဘယ်လို ဘယ်ပုံ မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့တာ ဂုဏ်ယူပြီးပြောမဆုံး..။ သူပြောပုံအရဆို ရဲတွေမသိလိုက်တဲ့ မုဒိမ်းမှုတွေ တပုံကြီး..။ထောင်ထဲမှာရန်ဖြစ်တာလဲမပြောနဲ့တော့..။
နေ့တိုင်းလိုလို…မျက်စိထဲ မြင်သမျှလူကို အနိုင်ကျင့်…။ ဒေါသကြီးပြီး ကိုယ်ကိုကိုယ်သတ်သေဖို့ ၂ ခါကြိုးစားဖူးတယ်။ သေသေ နေနေ မထူးဘူးဆိုတဲ့ကောင်..။ထောင်ထဲကထွက်ခါနီး ထောင်သူငယ်ချင်းတွေကို ဒီလိုပြောလိုက်သေးတယ်။
” ဒီတစ်ခါတော့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ယောက်ကို မုဒိမ်းကျင့်ပြီး ဓါးနဲ့ထိုးကြည့်ဦးမယ်…ငါ ပြန်ဝင်ခဲ့မယ်ကွာ။ ခဏစောင့်..”
၂၀၁၂ ခုနှစ် ၇ လပိုင်း ၃၁ ရက်နေ့ မြောင်မုတ်ရပ်ကွက် ( 면목동 ) စောဂျင်ဟန်းဟာ မော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့ လမ်းသလားနေတုန်း မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို လမ်းပေါ်မှာတွေ့တယ်။
သူမနောက်ကိုလိုက်ကြည့်ပြီး သူမ ဘယ်မှာနေလဲဆိုတာ မှတ်ထားလိုက်တယ်။စောဂျင်ဟန်းဟာ အဲဒီ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ထဲရှိတဲ့အချိန်အထိစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်…၊
၂၀၁၂ ခုနှစ် ၈ လပိုင်း ရ ရက်…..အခြေအနေပေးတာနဲ့ ပါဆယ်ပို့သမားယောင်ဆောင် တံခါးခေါက်… ၊ တံခါးဖွင့်ပေးတော့ မိန်းကလေး အိမ်ထဲဝင်ပြီး မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့ပြန်တယ်…။
မိန်းကလေးက ရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်ပေမဲ့ ရဲထောက်လှမ်းရေးတွေဟာ စောဂျင်ဟန်းမှန်းမသိခဲ့…။
၁၂ ရက်အကြာ…..ထောင်ထွက် စောဂျင်ဟန်းဟာ မုဒိမ်းထပ်ကျင့်ဖို့ အစီအစဉ်ဆွဲနေတယ်။တစ်ညလုံးအိပ်လို့မရ ကွန်ပြူတာတစ်လုံးနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတယ်။ဘယ်အိမ်ကိုဝင်ရင် ဘယ် ပြေးလမ်းနဲ့နီးမလဲ..?
သက်သေမကျန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ…?သူဟာထောင်ကထွက်လာပြီးကတည်းက တစ်ခါပဲ မုဒိမ်းကျင့်ရသေးတယ်ဆိုပြီး မကျေမနပ်ဖြစ်နေတယ်။
စောဂျင်ဟန်းဆိုတဲ့ လူယုတ်မာဟာ ဒီလို မိန်းကလေးတွေကို မကောင်းကြံဖို့ပဲ တွေးနေတဲ့သူပေါ့..၊ငွေကလည်းမရှိ…။ ငွေပေးပြီး ကာမဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်တောင် သူနဲ့အတူ ဘယ်မိန်းမမှ ကာမဆက်ဆံရဲမှာမဟုတ်ပါဘူး။
သူ့မှာ ထောင်ကတပ်ပေးလိုက်တဲ့ (electronic anklet) လျှပ်စစ် ခြေချင်းကြီးနဲ့လေ..။ဒီနေ့တော့ မိန်းမတစ်ယောက်ကို မုဒိမ်းကျင့်ဖြစ်အောင် ကျင့်မယ်လို့ သူတွေးလိုက်တယ်။
မနက်စောစော အိပ်ရာကထ…။လိုလိုမယ်မယ် .. မိန်းကလေးကအော်ရင် တိပ် ( tape ) နဲ့ပါးစပ်ပိတ်ရအောင် တိပ်ခွေ တစ်ခွေနဲ့ ဓါးတစ်လက် အိပ်ထဲ ထည့်လိုက်တယ်။
သူ viagra ဆိုတဲ့ စိတ်ကြွဆေး နှစ်ပြားကိုသောက်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ ဘယ်မိန်းကလေးကို မုဒိမ်းကျင့်ရင်ကောင်းမလဲ အမြန်လိုက်ရှာနေတယ်။
အဲဒီနေ့က ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၈ လပိုင်း ၂၀ ရက်နေ့ ဖြစ်တယ်။ဆိုးလ်မြို့- ဂွမ်ဂျင်းဂု- ဂျွန်းဂုတိဒုံ(Seoul- Gwangjin District-Junggok Dong)
မနက် ၉ နာရီ ၃၀ မိနစ်….စောဂျင်ဟန်းဟာ ကံဆိုး မိုးမှောင်ကျသူ မိန်းမတစ်ယောက်ကို တွေ့သွားတယ်…။သူမဟာ ကလေးနှစ်ယောက်ကို လက်ဆွဲပြီး ကလေးထိန်းကျောင်းကားကို စောင့်နေတဲ့ အသက် ၃၇နှစ် အရွယ်ရှိတဲ့ ကလေးအမေ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်…။
” ဒီမိန်းမနဲ ကလေးတွေ စောစောကပဲ ဟိုအဆောက်အဦးရဲ့ ဝရန်တာမှာတွေ့လိုက်သေးတယ်..”မုဒိမ်းကောင် စောဂျင်ဟန်းဟာ သူမနေတဲ့အိမ်ကိုတက်ကြည့်လိုက်တော့ တံခါးစေ့ထားတယ်။
သူဟာ ဝမ်းသာအားရ သူမအိမ်ကို ပြေးဝင်လိုက်ပြီး သူမ အိမ်ပြန်အလာကို အေးအေးဆေးဆေး စောင့်နေလိုက်တယ်။သူမ ဝင်လာတော့ ပုန်းနေရာကနေ ခုန်ထွက်လိုက်တယ်။
စောဂျင်ဟန်းရဲ့လက်ထဲမှာ ဓားတစ်ချောင်းနဲ့….။မမျော်လင့်ပဲ စောဂျင်ဟန်းကို အိမ်ထဲမှာတွေ့လိုက်ရတဲ့ အမျိုးသမီးက ကြောက်လန့်တကြားအော်ဟစ်အကူအညီတောင်းလိုက်တယ်။
” အား…အမယ်လေး!” ကယ်ကြပါဦး..။ သူခိုး!!!!”
မုဒိမ်းကောင်ဟာ အမျိုးသမီးကိုလှဲချ.. သူမကိုယ်လုံးကို ခွထိုင်ပြီး အပေါ်စီးက စိတ်တိုင်းကျ လက်သီးနဲ့ထိုး ၊ ရိုက်နှက်လိုက်တယ်။ အချက် ၄၀ ကျော် တဲ့အထိပေါ့…။
“တောင်းပန်ပါတယ်.. ကျွန်မကို မရိုက်ပါနဲ့ရှင် .. နာလွန်းလို့ပါ..” သူမက ထပ်ကာထပ်ကာတောင်းပန်တယ်။ “နားငြီးတယ်ကွာ”…
သူမ ပါးစပ်ကို တိပ်နဲ့ပိတ်လိုက်တယ်။ ဓါးနဲ့တစ်ချက်ထိုးပြီး နာကျင်နေတဲ့ သူမကို မုဒိမ်းကျင့်တော့တယ်။အမျိုးသမီးက ဝူးဝူးဝါးဝါး အော်ပြီး ရုန်းကန်တယ်။
အိမ်အောက်ထပ်ကကြားအောင် သူမ ခြေထောက်နဲ့ ကြမ်းပြင်ကို ထုတယ်။ဓါးနဲ့ထိုးတာတောင် မကြောက်မလန့် ရုန်းကန်နေတဲ့မိန်းမ..။စောဂျင်ဟန်းဟာ အမျိုးသမီးကို ဓါးနဲ့ထပ်ထိုးလိုက်တယ်။
အမျိုးသမီးရဲ့ တစ်အိမ်လုံးမှာ သွေးတွေ ချောင်းစီးသွားတယ်။သွေးသံရဲရဲအမျိုးသမီးကို လူယုတ်မာဟာ ဆက်ပြီး မုဒိမ်းကျင့်ပြန်တယ်။အမျိုးသမီးဟာ ဒီတစ်ခါတော့ လက်အုပ်ချီ တောင်းပန်ရှာတယ်။တောင်းပန်တာကို ဂရုတောင်မစိုက်… ။
မုဒိမ်းကောင်ဟာ ငိုယိုတောင်းပန်နေတဲ့ အမျိုးသမီးကို စိတ်တိုတိုနဲ့ တတိယအကြိမ် ဓါးနဲ့ထိုးလိုက်ပြန်တယ်။အမျိုးသမီးရဲ့ ဦးခေါင်းဟာ နံရံနဲ့ အကြိမ်ကြိမ်ဆောင့်မိတဲ့ ဒါဏ်ကြောင့် သွေးတွေဖြာကျလာတယ်။
အမျိုးသမီးက တစ်စုံတစ်ခုကို သတိရသွားပုံရတယ်။အရေးကြီးတဲ့ပုံစံနဲ့ အိမ်အဝင်အဝ တံခါးကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီး သူမ ပါးစပ်က တိပ်ကို ဖြုတ်ပေးဖို့ အမူအရာနဲ့ ပြောတာ့ စောဂျင်ဟန်းက ပါးစပ် တိပ်ကို ခွာပေးလိုက်တယ်။
”ဒီမှာ..! ကျွန်မ ကလေးတွေကျောင်းကားမလာသေးဘူး.. ကျွန်မ ပစ္စည်းတစ်ခုကျန်ခဲ့လို့ အိမ်ထဲဝင်ပြီး ပြန်လာယူတာပါ…။ ကလေးတွေပဲ အပြင်မှာကျန်ခဲ့တယ်။ ဒီအတိုင်းဆို သူတို့ရဲ့ဆရာမ အိမ်ထဲကိုဝင်လာလိမ့်မယ်..။ ရှင့်ကိုတွေ့မှာပဲ….”
“နင့်တကိုယ်လုံး သွေးအလိမ်းလိမ်းနဲ့ ဘယ်လို အပြင်ထွက်မလဲ …ကလေးတွေကိုငါသွားခေါ်မယ်…”
မုဒိမ်းကောင်ဟာ အပြင်ထွက်ဖို့ပြင်လိုက်တယ်။ ‘အပြင်ထွက်လို့ ဖြစ်ပါ့မလား’ လို့ ခဏတွေဝေနေတုန်း အမျိုးသမီးဟာ ရုတ်တရက် ဝရန်တာကို ပြေးထွက်ပြီး ပြတင်းပေါက်ကခုန်ချဖို့ကြိုးစားလိုက်တယ်။
အမှန်တော့ အမျိုးသမီးက ဉာဏ်ဆင်ပြီး ကလေးတွေ စောင့်နေတယ်လို့ လိမ်ပြောလိုက်တာပါ..။မုဒိမ်းကောင်ဟာ ဒေါသတကြီး အမျိုးသမီးကို ခုန်အုပ်လိုက်တယ်။ အမျိုးသမီးရဲ့လက်တွေဟာ ပြူတင်းပေါက်တံခါးလက်ကိုင်ကို မြဲမြံစွာဆုပ်ကိုင်ထားတယ်။
အမျိုးသမီးဟာ အော်ဟစ်အကူအညီတောင်းတယ်။ ခွာလိုက်တဲ့တိပ်နဲ့ ပါးစပ်ပိတ်ဖို့ ကြိုးစားပေမဲ့ မျက်နှာမှာ သွေးတွေနဲ့ချော်နေလို့ မရတော့ဘူး။
ဒီလို ရုန်းရင်းဆန်ခတ်တွေဖြစ်ပြီး ပြိုလဲသံတွေ၊ အော်သံတွေကြောင့် အောက်ထပ်အိမ်က ရဲတွေကို အကြောင်းကြားထားတယ်။ရဲတွေအမြန်ဆုံးရောက်လာတယ်။
အမျိုးသမီး အိမ်ကိုတံခါးခေါက်သံကြားတော့ သူမ မျော်လင့်ကြီးစွာ ရှိသမျှအင်အားနဲ့ ကျယ်လောင်စွာထပ် အော်ဟစ်လိ်ုက်တယ်။” ဦးလေးတို့ ကယ်ကြပါဦး…ကျွန်မ သေရပါတော့မယ်…!!!”
သူမဟာ မျော်လင့်ချက်တွေနဲ့ အားတက်သွားခဲ့တယ်။အသက်ချမ်းသာရာရပြီ…။ရဲတွေဟာ တံခါးကို တခါတည်း ရိုက်ချိုးပြီး အိမ်အထဲကိုဝင်လိုက်တယ်။အိမ်ထဲမှာ သွေးတွေ မြင်မကောင်း..။
အမျိုးသမီးဟာ ပြတင်းပေါက်တံခါး လက်ကိုင်ကို အတင်းအကြပ်ဆုပ်ကိုင်ထားဆဲ…စောဂျင်ဟန်းကတော့ အမျိုးသမီးရဲ့အနောက်မှာ….သူမဟာ သားနဲ့သမီးကို မှန်းဆပြီး ဝမ်းသာအားရအော်လိုက်တယ်။
” ကလေးတို့ရေ …အမေ လွတ်ပြီ…။”ရဲတွေကို မြင်သွားတဲ့ မုဒိမ်းကောင် စောဂျင်ဟန်းဟာ အတော် ဒေါသထွက်သွားတယ်။
” ကောင်မ နင့်ကြောင့် ရဲတွေရောက်လာတာ!!!!”ဒေါသတကြီးနဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ လည်ပင်းညာဖက်အခြမ်းကို ဓါးနဲ့ နှစ်ချက်ဆင့်ထိုးချလိုက်တော့တယ်။
အမျိုးသမီးပါးစပ်ထဲကသွေးတွေ အန်ထွက်လာတယ်။ တံခါးကို မြဲမြံစွာဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့လက်တွေဟာ ပြုတ်ကျသွားတယ်။ ပြီးတော့ သူမရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာဟာလည်း ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို ပြုတ်ကျသွားတော့တယ်။
ရဲတွေဟာ မုဒိမ်းကောင်စောဂျင်ဟန်းကို ဖမ်းချုပ်ပြီး အမျိုးသမီးကို စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်တယ်။သူမဟာ သေဆုံးနေပါပြီ..။အသက်ကယ်ဝန်ထမ်းတွေ ရောက်လာကြတယ်။
သေဆုံးသူ……ရဲအရာရှိဟာ မုဒိမ်းကောင် စောဂျင်ဟန်းကို လက်ထိတ်ခတ်ရင်း ဒီလိုပြောလိုက်တယ်။”ငါ့နာမည် *** ဖြစ်တယ်။
မင်းကို အိမ်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှု၊ လက်နှက်ကိုင်မှု၊ မုဒိမ်းမှု၊ လူသတ်မှုနဲ့ဖမ်းလိုက်ပြီ..ရှေ့နေ အသုံးပြုခွင့်ရှိတယ်။
အပြင်မှာငါတို့ ကားရှိတယ် … ရဲစခန်းကိုလိုက်ခဲ့ပါ..”ရဲလိုင်စင်ပြပြီး ဒီလိုပြောတဲ့ ရဲအရာရှိကို မုဒိမ်းကောင် စောဂျင်ဟန်းက ပြုံးလိုက်တယ်…။
” ဟား ….အပြင်မှာ လူတွေ ဒီလောက်အုံနေတာ ငါက မင်းတို့ပြောသလို အခု အပြင်ထွက်ရအောင် အရူးလားကွ..? ဦးထုတ်နဲ့ မျက်နှာဖုံး ယူခဲ့ .. မျက်နှာကာပြီးမှ လိုက်နိုင်မယ်..!”
ပြီးတော့… “လက်ထိတ်တဖက်ဖြုတ်ပေး .. အကျီင်္ပြန်ဝတ်ရမယ်ကွ…”သူ့အင်္ကျီဘောင်းဘီတွေ အေးအေးဆေးဆေးပြန်ဝတ် သူ့အိမ်လို ဆိုဖာပေါ်ခြေချိတ်ထိုင်နေလိုက်တယ်။
ရဲသားတစ်ယောက်ဟာ အနီးဆုံးဆိုင်က ဦးထုတ်နဲ့ မျက်နှာဖုံးကို အမြန်သွားဝယ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီအခြေအနေမျိုးမှာတောင် ကိုယ့်အတွက်ပဲ ကိုယ်ကြည့်တတ်တဲ့ မိစ္ဆာကောင်…။
ဦးထုတ်သွားဝယ်တဲ့ ရဲကို စောင့်နေရင်း“ မင်းတို့ လျှပ်စစ်ခြေကျင်းကြောင့် ဒီလိုဖြစ်ရတာကွ… ငါကိုဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ တရားခံ…ဟားဟား မင်းတို့ လျှပ်စစ်ခြေကျင်းကဘာ အသုံးကျလို့လဲကွာ မုဒိမ်းကျင့်တာ ဒါနဲ့ဆို ၂ ခါရှိပြီကွ… “သူ ပြောင်လှောင်ပြီး ပြောလိုက်သေးတယ်…။
စောဂျင်ဟန်းဟာ ဘယ်တော့မှ မိမိကိုယ် မိမိ အပြစ်တင်တဲ့သူမဟုတ်..။နောင်တ၊ ကြင်နာမှု၊ စာနာမှု ၊ အားနာမှု…ဒါတွေဟာ သူ့ဘဝမှာ ဘယ်တုန်းကမှမရှိခဲ့..။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့က သယ်ယူသွားတဲ့ အမျိုးသမီး အလောင်းကိုကြည့်ပြီး ပြောလိုက်တဲ့စကား….။
”အဲဒီကောင်မ… ငါမုဒိမ်းကျင့်ခဲ့တဲ့မိန်းမထဲမှာ အခက်ဆုံးကောင်မပဲ.. အော်ဟစ်နေလိုက်တာ.. နားတောင်ငြီးတယ်..%#@$””ဟေ့ကောင် မင်း ပါးစပ်ပိတ်ထားလိုက်စမ်း ..!”ရဲအရာရှိက မခံမရပ်နိုင် အော်လိုက်တယ်။
”ဘာလို့ပိတ်ရမှာလဲ… မင်း ငါ့ကို အမိန့်ပေးစရာမလိုဘူးကွ…ဒီကောင်မ ငြိမ်ငြိမ်ခံနေရင်တောင် ဒီလိုသေမှာမဟုတ်ဘူး ။ အော်ဟစ်နေလို့ သေရတာလေ..နည်းတောင် နည်းသေး..
”စောဂျင်ဟန်းဆိုတဲ့လူသားတစ်ဦးဟာ လူလောကကြီးထဲမှာ လူရယ်လို့ ဖြစ်မလာထိုက်တဲ့ ဒီလို ယုတ်မာပက်စက်တဲ့ ဆိုက်ကိုပါ့သ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလူမျိုးကို ဆိုက်ကိုပါ့သ်လို့ခေါ်ပါတယ်။
စောဂျင်ဟန်း ကို တရားသူကြီးက အလုပ်ကြမ်းနဲ့ မသေမချင်းထောင်ဒါဏ် အမိန့်ချလိုက်တယ်…။အဲဒီနေ့ ထောင်ထဲကို ပြန်ရောက်ရောက်ချင်း စောဂျင်ဟန်းက ထောင်ထဲကသူငယ်ချင်းကို အစောင့်ဝန်ထမ်းတွေကြားအောင် ရယ်ရယ်မောမောနဲ့ အော်ပြောတယ်။
”အင်း .. အပြင်မှာနေရတာထက်စာရင် ထောင်ထဲမှာနေရတာပိုပျော်တယ်။ ထောင်ထဲမှာ အေးအေးဆေးဆေးသေတော့မယ်ကွာ…ဟား ဟား”ဒီလိုလူမျိုးအတွက် ထောင်ဒါဏ်ဆိုတာ ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။
ထောင်ထဲမှာ ဟိုလူ ဒီလူအနိုင်ကျင့်ပြီး ဘုရင်တဆူလိုနေတဲ့ကောင်လေ…။ ထောင်ပျော်တစ်ယောက်ကို မသေမချင်းထောင်ဒါဏ်ပေးတော့ ပျော်တာပေါ့..။
အပိုင်း-၂ (တရားသူကြီးထံ ပေးပို့စာ )….ကျွန်တော်ဟာ တရားသူကြီးတစ်ယောက်ထံ ဒီလိုစာရေးရလိမ့်မယ်လို့ ဘယ်သောအခါကမှ မတွေးမိခဲ့ပါဘူး။တရားသူကြီးမင်း ကျွန်တော့်သားအဖ ၃ ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်ကို သိစေလိုပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ သေဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့ ရီ ** ရဲ့ လင်ယောက်ျားဖြစ်ပါတယ်…။ကျွန်တော့်မိန်းမဟာ ကျွန်တော်တို့ကိုခွဲခွာသွားတော့ အသက် ၃၇ နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ဟုတ်ပါတယ်…ကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူမ သေသွားပြီ…။
ကျွန်တော့် ဘဝမှာ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ အိပ်မက်များဖြစ်လိုက်ရင် ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲဗျာ….။ဒီလို ကျွန်တော်တို့ဘဝထဲကို ကျွန်တော့်မိန်းမ ပြန်မလာတော့ဘူးဆိုတာ အခုအထိယုံကြည်လို့ကို မရသေးဘူး..။
သေဆုံးသူ၏ အမျိုးသား…..သူမ အသတ်မခံရခင်ညက ကျွန်တော်နံဘေးမှာ ကလေးတွေနဲ့ ခရီးထွက်ခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေထိုင်ကြည့်ပြီး တယောက်ထဲ ပြုံးနေခဲ့တာ…”မိန်းမ ညဉ့်နက်နေပြီ .. အိပ်တော့..” ပြောပြီး ကျွန်တော် အိပ်ပျော်သွားတာ။
ဒါဟာ…သူမ ကလေးတွေကို နှုတ်ဆက်ပြီး နောက်ဆုံးကြည့်ခဲ့တာများလား..။ကျွန်တော်ဟာ လူမမယ် ကလေးနှစ်ယောက် လက်ကိုဆွဲပြီး ဘဝသစ်ကိုရုန်းကန်နေရပါပြီ…။
လူတွေက မိန်းမ စလင်းဘက်အိတ်ကို အမြဲ စလွယ်သိုင်းလွယ်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်ကို အရူးလို့ ထင်ကြမှာပေါ့။ကျွန်တော် သူမ စလင်းဘက်အိတ်ကို အမြဲလွယ်ထားတယ်။
ကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော် ကလေးတွေရဲ့ မိခင်နေရာ ဖခင်နေရာ နှစ်မျိုးလုံးတာဝန်ယူရမယ်ဆိုတာ သတိပေးထားတာပါ။စလင်းဘက်အိတ်ထဲမှာ ကျွန်တော် မိန်းမရဲ့ပစ္စည်းလေးတွေ သူမ မသေခင်ကအတိုင်းပဲ.,။
ကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့မိန်းမရဲ့ နေရာလပ်သွားတော့ သူမအလုပ်မှန်သမျှကို ကြုံးရုန်းလုပ်ကိုင်ရင်း ကျွန်တော့်မိန်းမကို ပိုသတိရ .. မျက်ရည်ကျမိတယ်။
ပိုက်ဆံရှာတော့လည်းကျွန်တော်…ကလေးနှစ်ယောက်အတွက် ထမင်းချက်တော့လဲကျွန်တော်… ထမင်းကျွေးတော့လည်းကျွန်တော်… အိမ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်တော့လည်း ကျွန်တော်…။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် မလုပ်နိုင်တာ တစ်ခုရှိတယ်။ ကလေးတွေကို သူတို့အမေနဲ့ ပြန်တွေ့ပေးဖို့ မတတ်နိုင်တော့ပြီ…။ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ အမြဲတမ်း အော်ဟစ်ငိုကြွေးနေမိပါတယ်။
ဒီလိုခံစားနေရတာ ကျွန်တော် တစ်ယောက်ထဲမဟုတ်ပါဘူး..အသက် ၃ နှစ်အရွယ် သမီးလေးနဲ့ ၅ နှစ်အရွယ် သားလေးကလည်း “အမေဘယ်တော့ ပြန်လာမလဲ..?” လို့ စောင့်နေရှာကြတုန်းပါပဲ…။ကလေးတွေ သူတို့အမေသေတာ မသိဘူးဗျာ..။
ကျွန်တော့်မိန်းမ အသတ်ခံရတဲ့နေ့က ရဲတွေနဲ့ရှုပ်နေလို့ ကလေးနှစ်ယောက်ကို သူတို့အဖွားက မူကြိုကျောင်းသွားကြိုပြီး သူမ အိမ်ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။ရုတ်တရက် အမေပျောက်သွားတဲ့ ကလေးတွေ…။
ကျွန်တော့် ကလေးတွေဟာ သေတယ် ဆိုတာ သိပ်နားမလည်သေးတဲ့အရွယ်မို့ … ကျွန်တော် ဘယ်လိုရှင်းပြရမှန်းတောင်မသိတော့ပါဘူး..။
အဲဒီနေ့ ရဲစခန်းကဖုန်းလာလို့ ဆေးရုံကို ကိုကျွန်တော် အပြေးရောက်လာခဲ့တယ်…။ကျွန်တော်ဟာ ရုတ်တရက် သူမ မျက်နှာကို မမှတ်မိဘူးခင်ဗျ..,။ သူမ မျက်နှာတစ်ခုလုံးဟာ မည်းနက်နေပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးလည်း ဒါဏ်ရာတွေပြည့်နေခဲ့ပါတယ်။
သေဆုံးသူ မိသားစု…..ကျွန်တော် သူမလက်ကို ကိုင်ကြည့်လိုက်တယ်။ အေးစက်တောင့်တင်းနေတယ်။မယုံနိုင်စရာ သူမသေသွားပြီ..။ကျွန်တော့်ကို ကယ်ကြပါဦး…။
သူမကိုယ်လုံးပေါ်က သွေးတွေငေးကြည့်ရင် လူသတ်သမားကို ဘယ်လောက်များကြောက်နေလိမ့်နေမလဲ…ဆိုတဲ့အတွေးက ကျွန်တော့် နှလုံးသားတွေကို စုတ်ဖြဲနေပါပြီ…။
သူမ ဘယ်လောက်များ တောင်းပန်ခဲ့ရှာမလဲ… ဘယ်လောက်များ ကျွန်တော့်ကို အားကိုးတကြီး သတိရနေလိမ့်မလဲ….။
ဘယ်လောက်များ ကလေးတွေကို စိတ်ပူနေလိုက်မလဲ….။မနက်မိုးလင်းရင် သူမ ကျွန်တော့်နံဘေးမှာရှိနေမယ်လို့ အခုအချိန်အထိ ထင်နေမိတုန်း…။ကျွန်တော် သိပ်ညံ့ခဲ့တယ်။
ကျွန်တော့် မိန်းမကို တစ်ခါလောက် ထမင်းပူပူလေး တစ်ပွဲလောက် ကျွေးခွင့်ရရင်သိပ်ကောင်းမှာပဲ…။အဲဒီမနက်က မိန်းမက ကျွန်တော့်ကို မနက်စာ ထမင်းကျွေးခဲ့တယ်။
“မိန်းမရေ မောင်နဲ့အတူ ထမင်းစားကွာ..” ဆိုတော့ “ကလေးတွေပို့ပြီးမှ စားနိုင်မယ်မောင်ရေ..” တဲ့..။
ကျွန်တော့်ကို ထမင်းကျွေး ကလေးတွေ ထမင်းကျွေး… ချွေးတလုံးလုံးနဲ့ ကျွန်တော့်မိန်းမ…။သူမ ဗိုက်ဆာနေရှာမှာပဲဗျာ…။ကျွန်တော် ထမင်းစားတိုင်း ကျွန်တော့်မိန်းမကို အားနာပြီး မျက်ရည်ကျရတယ်။
ကျွန်တော် ထမင်းစားဖို့ မတန်တဲ့ကောင်ပါ။ကလေးတွေသာမရှိရင် ကျွန်တော် တစ်နေရာကို ထွက်ပြေးသွားချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အလွန်ပင်ပန်းနေပါပြီ..။ ကျွန်တော် သေချင်ပါတယ်။
တရားသူကြီးမင်းခင်ဗျား…ဒီမုဒိမ်းလူသတ်ကောင်ကို သေဒါဏ်မပေးရင် ကျွန်တော် သူ့ကို သတ်ပစ်ရပါတော့မယ်။ကျွန်တော်တို့မိသားစုအတွက် ပင်ပင်ပန်းပန်းရုန်းကန်ခဲ့တဲ့ သူမမရှိတော့တဲ့ လောကကြီးဟာ ကျွန်တော့်အတွက်ငရဲပြည်ပါပဲ..။
ကျွန်တော်ဟာ ဆင်းရဲလို့ သူမကိုလက်ထပ်ပြီး ဟန်နီးမွန်းတောင် မသွားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါတောင် တချက်လေးမှ မငြိုငြင်တာ ကျွန်တော့်မိန်းမပါ …။ကျွန်တော်လေ.. သူမကို အင်္ကျီလေးတစ်ထည်တောင် အသစ်ဝယ်မပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။
ကျွန်တော့်မိန်းမ ဘာအပြစ်ရှိလို့လဲခင်ဗျာ…။ဒီကောင်ကို သေဒါဏ်မပေးနိုင်တဲ့ ကျွန်တော့်နိုင်ငံကို မုန်းတယ်ဗျာ…။
တရားသူကြီးမင်းခင်ဗျား…တန်ဖိုးရှိတဲ့ လူတစ်ယောက် သေသွားပြီ…။ ပစ္စည်းအခိုးခံရရင် ပြန်ရှာလို့ရပါသေးတယ်။ကျွန်တော့်မိန်းမကို ပြန်ရှင်အောင်လုပ်လို့မရတော့ဘူးလေ ခင်ဗျာ…။
တစ်နာရီလုံးလုံး ရိုက်နှက် ဓါးနဲ့ထိုးပြီး မသေမချင်းသတ်ရင်း မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့ရလို့သေသွားပါပြီခင်ဗျ…။တချို့လူတွေက လူသတ်ကောင်ကို ငယ်စဉ်က ဘဝပေးမကောင်းလို့ ဘာဖြစ်လို့ ညာဖြစ်လို့ သေဒါဏ်မပေးပဲ နားလည်ပေးနေကြပါလား…?
ရိုးရိုးသားသားကြိုးစားခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်မိသားစုဘက်ကလည်းတွေးပေးကြပါဦး..။ငယ်စဉ်က ကျွန်တော်တို့ လင်မယားနှစ်ယောက်လဲ မုဒိမ်းကောင် လူသတ်သမား စောဂျင်ဟန်း လို ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်ခဲ့ရတာပဲဗျ…။
ကျွန်တော်တို့ ရိုးရိုးသားသား ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ ဒီမိသားစု ဘဝလေးကို ထူထောင်ခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော် သူမနဲ့နေတဲ့အိမ်ကို အခုအထိ မဝင်ရဲသေးဘူး။
သူမ အမြဲလုပ်ခဲ့တဲ့ အိမ်အလုပ်တွေ… သူမလက်နဲ့ထိတွေ့ခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုလည်း မကိုင်တွယ်ရဲလို့ ကျွန်တော်တို့ အတူနေခဲ့တဲ့အိမ်နဲ့ဝေးရာကို ပြေးခဲ့ပြီ….။
အရင်က ကျွန်တော် အပြန်ချင်ခဲ့ဆုံးအိမ်ဟာ အခုတော့ ကျွန်တော့်အတွက် ငရဲပြည်ပါပဲ..။ကျွန်တော်တို့ ၃ ယောက် ကျွန်တော့် မိခင်အိမ်ရဲ့အခန်းကျဉ်းလေးမှာ အတူအိပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ…။
တရားသူကြီးမင်းခင်ဗျာ….။ဒီလူ အသက်ရှင်နေသေးတာ ကျွန်တော် သိနေသေးသရွေ့ ကျွန်တော် အဖန်တလဲလဲသေနေရပါတယ်။မုဒိမ်းကောင် လူသတ်သမားကို သေဒါဏ်ပေးဖို့ လေးစားစွာလျှောက်ထားအပ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တရားသူကြီးက သေဒါဏ်မပေးခဲ့ပါ.. ‘စောဂျင်ဟန်း’ ဟာ လူထုကိုဒုက္ခပေးခဲ့တာမဟုတ်..လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုသာသတ်ခဲ့တာမို့ နောက်ထပ်လူမသတ်၊မုဒိမ်းမကျင့်အောင် သေတဲ့အထိထောင်ထဲမှာထားရင် ရပါပြီတဲ့…။
နိဂုံး……၄ လအကြာ….။ခရစ်စမတ်အကြိုနေ့မို့ မူကြိုကျောင်းမှာ ကလေးတွေဟာ စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်။အလွန်အေးတဲ့ရာသီဥတုအောက်မှာ ခရစ်စမတ် ဘိုးဘိုးကြီး ( Santa Claus)ရောက်လာတယ်။
ဘိုးဘိုးကြီးက ကလေးတွေကို လက်ဆောင်တွေဝေပေးနေတယ်။မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ ကလေးမလေးတစ်ယောက်ကတော့ ခရစ်စမတ်ဘိုးဘိုးကြီးပေးတဲ့လက်ဆောင်ကို မယူဘူး။ခရစ်စမတ်ဘိုးဘိုးကြီးလက်ထဲကို ပြန်ထိုးထည့်ပေးလိုက်တယ်။
” ဟိုး.. ဟိုး…ဟိုး…သမီးလေး စုဂျင်း ဘာလက်ဆောင်လိုချင်လို့လဲ..?”ကလေးမလေးက မျော်လင့်တကြီး တောင်းဆိုလိုက်တယ်…။” အမေ့ကို ပြန်ခေါ်ပေးပါ…”
ဖခင်ဖြစ်သူကို အဲ ဒီအကြောင်းမူကြိုကျောင်းဆရာမက ပြန်ပြောပြတော့ ဖခင်ဟာ မျက်ရည်ကျရတယ်။သမီးရယ်… သမီးကို အဖေ ဘယ်လိုအားပေးရပါ့…။
၃၇ လသားအရွယ်သမီးငယ်က မျက်ရည်တွေကျနေတဲ့ ဖခင်ကိုကြည့်ပြီး စကားမပီတပီနဲ့ အားပေးစကားပြောလိုက်တယ်…။
” ဖေကြီး… မငိုပါနဲ့ သမီးတော့ အမေ့ကို မလွမ်းတော့ဘူး….. တကယ်ပြောတာပါ…”ပြီးတော့ သား၊သမီး နဲ့ ဖခင်ဟာ သုံးယောက်သား ဖက်ပြီးငိုလိုက်ကြတယ်…။
မရွှေမိုး ( ကိုရီးယား)
မကြာမီ ဖွင့်လစ်တော့မည့် ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံးမြေအောက်ကြယ်ငါးပွင့်ဟိုတယ်ကြီး….
မက္ကဆီကို ရေနံပိုက်လိုင်း ပေါက်ကွဲမှု မြင်ကွင်း
January 21, 2019 January 21, 2019 MM Live
ကားခမပါလို့ ကားပေါ်ကမောင်းချခံရတဲ့ ဆေးကျောင်းသူ၊ အေးနေတဲ့ဆောင်းရာသီမှာ အေးခဲပြီးသေဆုံးနေ
January 29, 2019 MM Live